चीन र अमेरिकाको चेपुवामा दक्षिणएशिया
चीनको विश्वव्यापी रूपमा विस्तारित भूमिका तथा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी विशेष चासोले नेपाललाई निकट भविष्यमा पक्का प्रभाव पार्नेछ।
महामारीमा शिक्षा : प्रविधि प्रयोगमा ढङ्गै पुगेन
शिक्षालयहरू खोल्ने कि बन्द गर्ने अहिलेको सङ्कथन यही हो। सिकाइ र पढाइ जोड्ने कला अपनाए यो सङ्कथन बदलिन्थ्यो नि! विद्यार्थी प्रथम भन्ने चिन्तन शिक्षक तथा प्राध्यापकमा आए यो सङ्कथन बदलिन्थ्यो नि!
“मैले जनमत संग्रहको नतीजाको विरोध गरेको भए गृहयुद्ध हुने डर थियो। सयकडौं मानिस मर्न सक्थे। मैले इतिहासको त्यत्रो बोझ बोकेर बाँच्न चाहिनँ।”